ဆရာဦးတင်လင်း (ကျောင်းဆရာ RIT, Temasek Poly, Singapore) (တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း) | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆရာဦးတင်လင်း (ကျောင်းဆရာ RIT, Temasek Poly, Singapore)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စင်ကာပူကိုရောက်မယ်ဆိုတော့ မြန်မာကလပ်ကို လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ပေးဖို့ စင်ကာပူအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းက ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဖြစ်သဘော မြန်မာရာဂဏန်းလောက်နဲ့ စင်ကာပူ NTU တက္ကသိုလ်မှာ လုပ်ဖို့နေရာ ပေးပေမယ့်၊ စင်ကာပူရောက်မြန်မာများစွာ တောင်းဆိုမှုကြောင့် လူ၅၀၀၀ ဆံ့တဲ့ စင်တိုးစားမှာ ဈေးနှုန်းကြီးစွာပေး၍ ငှားရမ်း ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၇၀ ကျော်နဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရပါတယ်။ ဝင်ကြေးအဖြစ် ၁၅ ဒေါ်လာ သတ်မှတ် ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာများ ပွဲဆူကြမှာ စိုးရိမ်နေသူများ၏ရှိလို့၊ လုံခြုံရေးတင်းကြပ်မယ်၊ မှတ်ပုံတင်ပြရမယ် ..စည်းကမ်းချက်တွေ များစွာလုပ်ပေမဲ့ အလွန်စည်းကမ်းရှိတဲ့မြန်မာများက လက်မှတ်တန်းစီဝယ်ခြင်း၊ အချင်းချင်းစည်းကမ်းစာင့်ထိန်းမှုတို့ကြောင့်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စကားပြောတဲ့နေ့မှာ စနစ်တကျအောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဆို၊ က၊ တီး၊ သဘာပတိသမားများအတွက်တော့ စင်ပေါ်တက်ဖို့ တော်တော်ပင်ပန်းစွာ စီစဉ်ရပါတယ်။ ရှေ့ထွက်ပြီး ကူညီလုပ်ကိုင်ပေး သူများစွာ ရှိသလို နောက်ကွယ်က လုပ်ပေးတဲ့ မြန်မာများစွာလည်းရှိကြပါတယ်။ ဆရာဦးတင်လင်း မြန်မာကလပ် ဒုဥက္ကဌ တာဝန်ယူထားတော့ နောက်ကွယ်က ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ မြန်မာတဦးအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ရပါမယ်။ ယခုအချိန်မှာတော့ မြန်မာကလပ်ရဲ့ ဥက္ကဌတာဝန်နဲ့ စင်ကာပူ တိမားဆက်ပိုလီ Temasek Poly Lecturer အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ် ပါတယ်။
2 Responses to ဆရာဦးတင်လင်း (ကျောင်းဆရာ RIT, Temasek Poly, Singapore) (တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း)
၀ိသကြုံ on May 20, 2015 at 10:40 am
ကျောင်းတော်ကြီးက အင်ဂျင်နီယာ အကောင်းစားကြီးတွေ မွေးထုတ်ပေးပါလျက် အားလုံး သူပုန်စာရင်း အသွင်းခံရတာ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲဆရာ၊ တိုင်းပြည်ကို နလဗိန်းတုန်းတွေ အုပ်ချုပ်နေတာမှန်ပေမဲ့ ဒီ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတွေ အကုန်ေဘးရောက်ကုန်ရတာဘာ့ကြာင့်ပါလဲ
hla myint. on May 21, 2015 at 5:04 pm
very interesting personalty.
Experience as teacher 26 years in RIT& 13years in Singapore.
ဆောင်းဝေ (နတ်မောက်) ● လူအုပ်ကြီး https://t.co/cXG1u0tt2C https://t.co/q3JbtFFs2F about 36 minutes ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း နေလင်းအောင် (မန်း) ရဲ့ ဘာလဲဟဲ့ … ငြိမ်းချမ်းရေး … https://t.co/KBu5N2v701 https://t.co/zbvjXkhRvN about 1 hour ago ReplyRetweetFavorite